Ungayakha kanjani i-animatedbar yakho ene-Gimp | Kusuka kuLinux
Ungayakha kanjani i-animatedbar yakho ene-Gimp
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Umklamo, I-GNU / Linux
Umsebenzisi tavo ishiye namuhla okokufundisa esithangamini sethu, okokufundisa engikushicilela lapha ngoba kukufanele 😀
Njengoba ngithembisile isikweletu, izolo ku-IRC ngithembise ukusenza KZKG ^ Gaara yenza lesi sifundo sendlela yokwakha ibha yomsebenzisi yethu ephathekayo ku I-Gimp.
Ngiyaxolisa ngama-screenshots esiNgisi, njengoba ngiwasebenzisa kulolo limi ngoba kuyasiza kimi lapho ngilandela okokufundisa
Into yokuqala esizoyenza ukuvula i-Gimp bese ukhetha umbala ongaphambili onenani elilandelayo:
Njengoba kubonakala ku-skrini, inani kufanele libe fcfdfe Ngale ndlela, ingemuva lizohambisana nobuhle besithangami.
Ngemuva kwalokho siya kuthebhu Ifayela> Okusha futhi ewindini elibonakalayo sikhetha lezi zilinganiso:
Inani eliqondile kufanele libe ngu-450 no-60 ngokuma mpo (ungakwazi noma kunjalo ngokuya ngokuthanda kwakho). Futhi ku- Izinketho ezithuthukile kumele bakhethe umbala ongaphambili njengesizinda.
Isinyathelo esilandelayo ukusebenzisa ithuluzi lombhalo ukubhala okuqukethwe ibha yomsebenzisi ezoba nakho, kimi ngisebenzisa ibinzana: <° Kusuka Kumsebenzisi we-Linux lapho bebhale umbhalo kuleyo ngqimba abayinikezayo qhafaza kwesokudla> i-alpha ukuze ukhethe. Ngombhalo okhethiwe sithatha ithuluzi lokuxuba (i-gradient), kimi ngisebenzisa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, kepha bangasebenzisa leyo abayithandayo. Bagcwalisa ukukhetha nge-gradient, bekushiya kanjena:
Ngokulandelayo sizophinda kabili isendlalelo sombhalo izikhathi eziyi-14 ukufeza izingqimba ezifanayo eziyi-15:
Umaka A ikhombisa lapho kufanele uchofoze khona ukuphinda ungqimba olukhethiwe
Kusukela manje kuqhubeke sizosebenza ngalezo zingqimba, sengeza izihlungi nezinto ezibonakalayo
* Isinyathelo sokuqala ukusebenza kusuka kusendlalelo 1 kuye ku-4 okubandakanya ukuya ku- Izihlungi> Blur> Blur Gaussian namanani azosetshenziswa alandelayo kusendlalelo ngasinye:
Kusendlalelo 1 sokuhlunga izilungiselelo:
Kuvundlile: 12 px
Kuqondile: 12 px
Kusendlalelo 2 sokuhlunga izilungiselelo:
Kuvundlile: 9 px
Kuqondile: 9 px
Kuzilungiselelo zokuhlunga zesendlalelo 3:
Kuvundlile: 6 px
Kuqondile: 6 px
Okokuhlelwa kwesihlungi sesi-4:
Kuvundlile: 3 px
Kuqondile: 3 px
* Njengesinyathelo sesibili sizosebenza kusuka kusendlalelo se-11 kuye ku-15 (okubandakanya), okungukuthi ngezingqimba ezinhlanu zokugcina.Kokuqala kwakho konke kumele sivumelanise lezi zingqimba ezi-5 zokugcina nobukhulu besithombe, lokhu kubalulekile ukufeza umphumela oyifunayo le modi: ithebhu Izinhla> Qondanisa nosayizi wesithombe. Ngemuva kwalokho siqamba kabusha izingqimba ngezinombolo ngamunye ngokuchofoza kabili kusendlalelo, bashintsha igama lalo libe izinombolo.
Isihlungi esizosisebenzisa kuzendlalelo ngu Hlunga> Fiphaza> Ukufiphaza kokunyakaza futhi sizoyisebenzisa ngokulandelayo kusendlalelo ngasinye kanye nempinda esizokwakhela ngamunye wabo:
Isendlalelo esiphindiwe 11.
Hlunga izilungiselelo, zempinda nezendlalelo zoqobo ngokulandelana:
Isendlalelo 11 nekhophi kuhlanganisiwe (chofoza kwesokudla kwikhophi yesendlalelo 11 bese ukhetha ukuhlanganisa phansi)
Isendlalelo esiphindiwe 12.
Ukubheka engela: 180
Isendlalelo esingu-12 nekhophi kuhlanganisiwe.
Isendlalelo esiphindiwe 13.
Isendlalelo esingu-13 nekhophi kuhlanganisiwe.
Isendlalelo esiphindiwe 14
Isendlalelo esingu-14 nekhophi kuhlanganisiwe.
Isendlalelo esiphindiwe 15
Kuhlanganiswe ungqimba we-15 wekhophi.
Esizokwenza manje ukuguqula ukubonakala kwezendlalelo ngalezi zilungiselelo:
1 kuya ku-60%
2 kuya ku-70%
3 kuya ku-80%
4 kuya ku-90%
11 kuya ku-90%
12 kuya ku-80%
13 kuya ku-70%
14 kuya ku-60%
15 kuya ku-50%
Sizokhetha isendlalelo sethu sangemuva ukusiphinda amahlandla amane, sishiya izingqimba ezinhlanu ezifanayo. Siphakamisa isendlalelo sokugcina esiyimpinda ngaphezu kwesendlalelo sethu 1 (umcibisholo ukhombe phezulu ku-navigator yesendlalelo eduze komaka A).
Siyaphinda futhi futhi siyiphakamise ngaphezulu kwesendlalelo 2 njalonjalo, sishiya ingemuva lingene phakathi kwezendlalelo zombhalo ezinjengale:
Manje ake ifayela> gcina njenge negama lefayela ngesandiso .gif ekugcineni isibonelo:ibha yomsebenzisi.gif .
Ewindini elivelayo kubalulekile ukuthi umake inketho:
Ngemuva kwalokho sicindezela ukuthekelisa bese samukela.
Sizulazula siye kufayela lethu futhi kufanele libukeke kanjena:
Ngiyethemba uyithola ilusizo futhi iqondakala kahle, noma yimiphi imibuzo ayinqikazi ukungithinta, ngishiya esinye isibonelo semiphumela engatholwa:
Uma uqaphela kubhanna wesibili ngihlele izikhathi zokuhlala kuzimele ... ngizokungeza ngokuhamba kwesikhathi, akuyona leyo nto eyinkimbinkimbi.
Ngiyabonga kakhulu ku- tavo Ngalesi sifundo esihle kakhulu, umphumela muhle kakhulu haha ​​... futhi, ukukwazisa ukuthi uma ufuna ukubeka okokufundisa lapha kusuka ku-Gimp, izindatshana noma yini oyibona ithakazelisa, kuzoba udumo kithi 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Umklamo » Ungayakha kanjani i-animatedbar yakho ene-Gimp
Kumele ngikwenze lokho ngeGimp !!!
Ake sibone ukuthi kuleli sonto ngikwazi 😉
Kusho ukuthini ukuthi "isigxobo" futhi usisebenzisa kuziphi izwe?
O, futhi balibiza kanjani?
pole = soyez le premier = owokuqala ukuphawula
Pole livela isikhundla pole.
Okuthakazelisa i-OO ufunda izinto ezintsha lapha 🙂
Kuyathakazelisa! Bengingazi lolo lwazi
Futhi ukuphinyiselwa? »Pole», «inkukhu», «pol»?
Ngiyabonga kakhulu @ KZKG ^ Gaara ngokuyithumela, inhlonipho ingeyami ngokuthola ithuba lokusabalalisa igama ngeGimp, ithuluzi elihle kakhulu elithathwa ngokungafanele ngokungafanele.
Ngizozama ukufaka okokufundisa okuyinqaba ngezimpelasonto, kuncane engingakwenza ukubonga lolu hlelo oluhle kakhulu. Ngivela e-Photoshop futhi ekuqaleni bekunzima ukuzivumelanisa noshintsho kodwa bekuwufanele umzamo.
Ngiphinde ngenze ezinye izinto ku-Blender kepha ngisahlaza okotshani okuncane… .Ukuntula umkhuba hehe
Ngiyaphinda ngiyakubongela ngomsebenzi owenzayo kuleli khasi.
Ngiyabonga Tavo, okokufundisa okuhle kakhulu. Yize ngingazi lutho ngokuqanjwa kwemidwebo, i-GIMP iyithuluzi eliwusizo elingisizile ezimeni eziningi. Ngenxa yakhe, ngifunde ukudala ama-logo alula kodwa amahle kakhulu; inezifanekiso nemiphumela eminingi yama-logo. Ngingathanda ukufunda okwengeziwe ngaleli thuluzi. Sethemba ukuthi ungaqhubeka nokwabelana ngolwazi oluthe xaxa kule bhulogi. Ozithobayo.
Ngiyabonga ngokuphawula kwakho uCarlos… .Ngokwenza umkhuba ujwayelene nalolu hlelo. Ngicabanga ukuthi iphuzu elibhekene neGimp ukuthi akukho ukusatshalaliswa okungaka mayelana nohlelo kanye nezifundo ezimbalwa. Unethuba lokwengeza ama-plugins amaningi enza imisebenzi isebenze kalula. , okukhona ku-Photoshop futhi okungenzeka kodwa izandiso ezibaluleke kakhulu ziyabiza
Eshu, bengingazi nokuthi kunezandiso ze-Photoshop, futhi bengingacabangi ukuthi izandiso ezinjalo zingabiza. Ngiyethemba ukuthi singajabulela okunye kokufundisa kwakho, ngiyabonga kakhulu.
wow ngizokwenza njengamanje imikhonzo ye-OO
Kuyaziswa, kuhle kimi ukuzijwayeza ne-gimp.
Ngibonga umhlahlandlela tavo okuncane ukufunda ukuthi ungazenza kanjani izinto ngazo I-GIMP
Kuhle 😀 Uma nginesikhathi ngiyazama.
Kuhle lapho nginentshisekelo yokwakhiwa kwemidwebo ngiyizama nge-XD
Kuhle tuto, kepha kukhona kodwa:
Ama-userbars (okungenani iningi elikhulu) angama-350 × 19, ngakho-ke lokhu kudlula usayizi. Qaphela, angimelene nobukhulu be-bar yomsebenzisi kulesi sifundo, bengifuna nje ukucacisa leli phuzu (ukuthi ngenza nama-userbars).
Kuyafaneleka ukucaciswa, kuyiqiniso ukuthi ibha yomsebenzisi ngokuvamile incane. Ukugqwayiza kungenziwa nganoma yisiphi isayizi lesifanekiso, esingathinti umphumela wokugcina. Usayizi ungafanelana kakhulu nesibhengezo noma isiginesha
Amasiginesha e-animated amaforamu, yiziphi izinkumbulo ezinhle ...
Ibhukwana elihle, ngithanda umphumela otholakala. Ngizotshela uRen ukuthi angenze ngibe omunye weTrisquel xD
Hleze, mhlawumbe futhi ngizozenzela ngokwami ​​ukuthi angilahlekelwa yilutho ngokuzama 😉
Lokhu +1 okukhulu
Ungazi kanjani ukuthi ngabe iphakethe lifakiwe noma cha ngendlela elula futhi esheshayo
I-Turpial: iklayenti le-Twitter laseVenezuela